လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ Residentency of Latvia မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများလတ်ဗီးယားရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်းသည်လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုတိယနေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ , လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ လတ်ဗီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ , လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လတ်ဗီးယားတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်လတ်ဗီယာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လတ်ဗီးယားသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံသားဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ , လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ လတ်ဗီးယားမှရွှေဗီဇာ၊ လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ, လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ လတ်ဗီးယားတွင်ဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ လတ်ဗီးယားတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ နှင့်လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ လတ်ဗီးယားတွင်နေထိုင်သောရွှေဗီဇာ၊ လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်, လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်လတ်ဗီးယားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 80,000
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ခြင်းသည် ၁၉ ရာစု၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအစမှစတင်ခဲ့ပြီး ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်နိုင်ငံသည်ဘောလ်တစ်ပြည်နယ်များတွင်စက်မှုအင်အားအရှိဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည်စျေးကွက်စီးပွားရေးသို့တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လတ်ဗီးယားလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်သိသိသာသာငွေရေးကြေးရေးအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ၂၁ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်လတ်ဗီးယားရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအများစုကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘောလ်တစ်ဒေသသည်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောဈေးကစားသူများ၏ကန့်ကွက်မှုကိုအများဆုံးရှာဖွေသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အံ့ foundation စရာကောင်းလှသည့်အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ညှိနှိုင်းရေးကိရိယာများပေးသောနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံတွင်လတ်ဗီးယားသည်မရင်းနှီးသောထင်မြင်ချက်များအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကူအညီနှင့်ပြen္ဌာန်းချက်များပေးခြင်းဖြင့်သီးခြားရပ်တည်ခဲ့သည်။
အစိုးရမှထောက်ပံ့ထားသောညွှန်ကြားချက်မူဘောင်သည်လတ်ဗီးယားတွင်နေထိုင်သောပြည်ပရောက်သူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သင်အားအရေးကြီးသောဖက်ဒရယ်အငြိမ်းစားလက်ထောက်ကတိကဝတ်များကိုပေးအပ်ပြီးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည်။ သို့သော်လေ့ကျင့်ခန်းများလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျောင်းသို့၎င်းတို့၏လူငယ်များကိုစေလွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့်စွမ်းရည်များကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ရရှိကြသည်။
လတ်ဗီးယားတွင်သိပ္ပံကောလိပ်နှစ်ခုဖြစ်သော Riga နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့်လတ်ဗီးယားတက္ကသိုလ်နှင့်လတ်ဗီးယားစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် Daugavpils တက္ကသိုလ်တို့ပါဝင်သည်။
လတ်ဗီးယားရှိပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဘောင်ကိုဖက်ဒရယ်အငြိမ်းစားလက်ထောက်နှင့်အချို့သောကုထုံးများအတွက်အရစ်ကျငွေပေးချေခြင်းဖြင့်လတ်ဗီးယားအမျိုးသားကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမှစီမံသည်။
အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောမူဘောင်သည်လတ်ဗီးယားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်နေထိုင်ခြင်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းအချို့သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်အခကြေးငွေအနည်းငယ်သာရှိမည်။ စောင့်ရှောက်မှု၏သဘောသဘာဝသည်အခြားသောဥရောပနိုင်ငံများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှမဟုတ်ပါ။
လတ်တလောတွင်တိုးတက်လာသည်ဟုဆိုသော်လည်းလတ်ဗီးယားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဘောင်သည်ကုထုံး၊ အကူအညီမဲ့သောရုံးများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆေးညွှန်းများအတွက်ကြာရှည်စွာဆွဲထားရသည့်အချိန်များကြောင့်ဥရောပတွင်အသိသာဆုံးသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာနေရာတွင်ရှိနေသေးသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ လတ်ဗီးယား၌အရေးပေါ်ဆေးခန်းအရေအတွက်ခွဲဝေခဲ့ပြီး၎င်း၏ထိပ်တန်းလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများသည်မတူညီသောနိုင်ငံများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
သင်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏ ၇၂,၄၄၄ ကီလိုမီတာလမ်းပေါ်ရှိအဖွဲ့အစည်းကိုမောင်းနှင်လိုသောအခွင့်အလမ်းတွင်သင်၏မူလနိုင်ငံမှကားမောင်းခွင့်နှင့်အတူတစ်နှစ်ခွဲကြာတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရလိမ့်မည်။
လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ လတ်ဗီးယား
ဗီဇာ / နှစ်ရှည်နေထိုင်ခွင့် (၂ နှစ် + ၃ နှစ်)
လတ်ဗီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
တရားဝင်နေထိုင်မှု၏5နှစ်ပြီးနောက်
PR စနစ်နှင့်အတူ5နှစ်အကြာတွင်။
လူဝင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘွန်း 0% အတိုးနှုန်းမှာယူရိုတစ်သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်
စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၃ နှစ်တာကာလအတွင်းယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ကိုအိုင်ယာလန်လုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ သည်အတည်ပြုထားသောရန်ပုံငွေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Trusts အိုင်ယာလန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်သောမည်သည့်အိုင်ယာလန် REIT တွင်မဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းဆုံးမှာ ၂ သန်းဖြစ်သည်။ ယူရို ၂ သန်းပမာဏရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအိုင်ယာလန် REITs အမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
ရောနှောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနည်းဆုံးယူရို ၄၅၀,၀၀၀ အနည်းဆုံးရှိသောလူနေအိမ်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အနည်းဆုံးယူရို ၉၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့လာသောလူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှောင်ကြိုးတွင်တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ရှိသည်။ ငွေချေးစာချုပ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည် ၀ ယ်ယူထားသောမြေ၏တန်ဖိုးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိတော့ပါ။
ပဒေသာပင်များ တစ် ဦး ချင်း၏ပရဟိတအလှူငွေယူရို ၅၀၀,၀၀၀ (ယူရို ၄၀၀,၀၀၀ (၅ ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလူ ဦး ရေသည်သင့်လျော်သောစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်၎င်းတို့၏အလှူငွေကိုစုဆောင်းထားခြင်း) ။
အဘယ်ကြောင့်လတ်ဗီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
လတ်ဗီးယား is အပြည့်အဝအီးနှင့် Schengen ဇုန်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သောသေးငယ်တဲ့ဘောလ်တစ်တိုင်းပြည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လွယ်ကူသောအစီအစဉ်တစ်ခုပေးထားသည်။ Schengen ဇုန်၏နိုင်ငံ ၂၆ ခုလုံးအတွက်သင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သင်သည်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံရှိပြည်နယ်ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိုတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေထိုင်ခွင့်အခြေအနေမရှိပါ၊ သို့သော်သင်တိုင်းပြည်ကိုသင်ဆန္ဒရှိသမျှအကြိမ်ပေါင်းများစွာထွက်ခွာနိုင်သည်။
Residency လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
နောက်ထပ်ငါးနှစ်ထပ်တိုးစရာမလိုဘဲသင်တိုးချဲ့နိုင်သည့် ၅ နှစ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ လတ်ဗီးယားတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ရှိမှုကိုသင်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်များမှာသင်၌မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာတစ်ခုရှိပြီးတစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး ၁ ရက်နေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၁၀ နှစ်ကြာတရားဝင်နေထိုင်ပြီးမှနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရနိုင်သည်။
လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်သည်အနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ဖြင့်လတ်ဗီးယားရှိအိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒုတိယရွေးချယ်မှုမှာအနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်ယူရို ၂၅၀,၀၀၀ နှင့်လည်းအတိုးမဲ့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘဏ်ငွေချေးစာချုပ်ကိုအနည်းဆုံးယူရို ၂၈၀,၀၀၀ လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုစိတ် ၀ င်စားနိုင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးသည် ၅ နှစ်ကာလအတွင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်နှင့်ဘဏ်ငွေချေးစာချုပ်များအတွက်အနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။
လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ လတ်ဗီးယားအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်လတ်ဗီးယားရှိသူတို့၏မိသားစုများအားလတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ လတ်ဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လတ်ဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်လတ်ဗီးယားမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲလတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ လတ်ဗီးယားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ လတ်ဗီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ငါတို့တတ်နိုင်တဆင့်လတ်ဗီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်လတ်ဗီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှလတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
လတ်ဗီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
လတ်ဗီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှလတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
လတ်ဗီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
လတ်ဗီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဗီးယားတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကလတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးလတ်ဗီးယားရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးလတ်တလောတွင်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနေသောလတ်ဗီးယားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်လတ်ဗီးယား Residency
လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်လတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ လတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကိုအခြေခံရမည်ကို အခြေခံ၍ လတ်ဗီးယားမှသို့မဟုတ်လတ်ဗီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုလတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖောက်သည်များအား Residence Residence ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့် Residence Resident Permit ရရှိရန်လက်ဝယ်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
လတ်ဗီးယားအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူလတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Duration:2လအတွင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်လတ်ဗီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များနှင့်လက်ဝယ်ရှိလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များဖြန့်ဖြူးသူများကိုလတ်ဗီးယားမှသို့မဟုတ်သို့ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် လတ်ဗီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်လတ်ဗီးယားမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် လတ်ဗီးယားတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် လတ်ဗီးယားအတွက် လတ်ဗီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက လတ်ဗီးယားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ လတ်ဗီးယားတွင်သိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လတ်ဗီးယားအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကိုလတ်ဗီးယားအတွက်ထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် လတ်ဗီးယားအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု လတ်ဗီးယားအတွက် လတ်ဗီးယားရှိဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက လတ်ဗီးယား လတ်ဗီးယားမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရှေ့ရပျ လတ်ဗီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်လတ်ဗီးယားနှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်လတ်ဗီးယားရှိအာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များအားဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်လတ်ဗီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုလတ်ဗီးယားနိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်လတ်ဗီးယားသို့ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောလတ်ဗီးယားအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များသည်လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏လတ်ဗီးယားအတွက်နေထိုင်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်လတ်ဗီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးလတ်ဗီးယားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
အမှု၌၊ သင်၏ Residency သည်လတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်လျှင်၊ မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ လတ်ဗီးယားအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ လတ်ဗီးယားအတွက်
ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဗီးယားတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူလတ်ဗီးယားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဗီးယားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ လတ်ဗီးယားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency အပြင်လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဗီးယားအတွက်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလတ်ဗီးယားနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည့်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်သည်။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လတ်ဗီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်အကူအညီဖြင့်လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ လတ်ဗီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (လတ်ဗီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
လတ်ဗီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် လတ်ဗီးယားရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် နှင့်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်များသည်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Inca သင်အဘို့, လတ်ဗီးယားအတွက်အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် လတ်ဗီးယားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် လတ်ဗီးယားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်စီစဉ်ရန်လတ်ဗီးယား လတ်ဗီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ လတ်ဗီးယားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
လတ်ဗီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ လတ်ဗီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် လတ်ဗီးယားအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
လတ်ဗီးယားအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
လတ်ဗီးယားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ လတ်ဗီးယားအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, လတ်ဗီးယားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
လတ်ဗီးယားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
လတ်ဗီးယားရှိ Setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
လတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း လတ်ဗီးယား.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုလတ်ဗီးယားတွင်ပေးသည်
လတ်ဗီးယား၌ Web ဒီဇိုင်း
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
လတ်ဗီးယားအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
လတ်ဗီးယားရှိ App Development
လတ်ဗီးယားအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်လတ်ဗီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ လတ်ဗီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားပြီးလတ်ဗီးယား၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်လတ်ဗီးယားအတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ သင်သည်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်လတ်ဗီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏လိုင်စင်ကိုတရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုသင့်ပြီးလတ်ဗီးယားပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်း (သို့) လတ်ဗီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးအဖြေများ - လတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းများဖြင့်လတ်ဗီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်လက်ဝဲနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကို `လတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း 'ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကကူညီခဲ့သည် လတ်ဗီးယားမှာ။
လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် လတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
လတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလတ်ဗီးယားနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ဝယ်ထားရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်လတ်ဗီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာလတ်ဗီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်လတ်ဗီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသား။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးလတ်ဗီးယားနိုင်ငံ | လတ်ဗီးယားရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလတ်ဗီးယားနိုင်ငံ | စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် | လတ်ဗီးယားအတွက်စျေးသက်သာတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလတ်ဗီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်နည်းလမ်းများဖြင့်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလတ်ဗီးယားနိုင်ငံသို့လျှောက်ထားသည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ရှေ့နေများနှင့်လတ်ဗီးယားအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လတ်ဗီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
လတ်ဗီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု လတ်ဗီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ လတ်ဗီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ လတ်ဗီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ရွှေဗီဇာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေများစသည်တို့မှတဆင့်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လတ်ဗီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ လတ်ဗီးယားမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်လတ်ဗီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ လတ်ဗီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လတ်ဗီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှလတ်ဗီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
လတ်ဗီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ လက်ဗီယာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ လတ်ဗီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ လတ်ဗီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
လတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် EUR ၈၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်လတ်ဗီးယားကိုတရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ လတ်ဗီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်လတ်ဗီးယားမှကိုယ်စားလှယ်များသည် Residency ကိုလတ်ဗီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
Residence မှလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များအတွက်မြင့်မားသောအသားတင်တန်ဖိုးရှိသူများအတွက် Residency အတွက် Residency ကုန်ကျမှုသည် Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ကြေးပေးရသည်။ Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည် Residency လျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်လတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှလတ်ဗီးယားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှလတ်ဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှလတ်ဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှလတ်ဗီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှလတ်ဗီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှလတ်ဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးမှလတ်ဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု လတ်ဗီးယားအတွက်
link ကိုမှ လတ်ဗီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန လတ်ဗီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်